UN-ta oo bogaadisay dadaalka wadamada AFRIKA uga hortageen Covid-19 - Horseed Media • Somali News
UN-ta oo bogaadisay dadaalka wadamada AFRIKA uga hortageen Covid-19
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa soo dhaweeyey tilaabooyinka ay qaadeen dalalka Qaarada Afrika ee ka hortagida Fayruska Covid-19, isagoo sheegay in ay tilaabooyinkaasi hoos u dhigtay tirada dadka u jiifa cudurkan.
Warbixin kasoo baxday Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in illaa iyo hada in dad gaaraya 2.500 qof cudurkan ugu dhinteen Qaarada Afrika, walow ay Qaramada Midoobay ka digtay in wadamada Afrika ay soo foodsaari karto dhaqaale xumo iyo cunto yaraan.
Xoghayaha Qaramada Midoobay ayaa ugu baaqay Beesha Caalamka in la dardar geliyo taageerada lasiinayo dalalka Afrika, isagoo sheegay in ay muhiim tahay in sare loo qaado tayada adeega caafimaad.
#COVID19 threatens the important progress Africa has made in recent years to advance the well-being of the continent’s people.
Global solidarity with Africa is an urgent imperative – now & for recovering better.https://t.co/SF1YjkSenu pic.twitter.com/TMs4fVQN13
Antonio Guterres ayaa sidoo kale sheegay in hadii la helo Daawada ama Talaalka cudurkan loo baahan yahay in si siman loogu qeybiyo wadamada Afrika oo aan lagu xirin lacago badan.
Baaqa Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa waxaa kamid ahaa in wax laga qabto dhaqaale-burburka uu cudurkan ku keeni karo ganacsiga dalalka Afrika, loona baahan yahay in dhaqaale lagu bixiyo sidii looga hortagi lahaa gaajo iyo macaluul saameysa dadka saboolka ah ee Qaarada ku dhaqan.